Chọrọ na-ekiri ndị MP4 videos na gị ọkpụkpọ DVD? Ọfọn, anyị nile maara na mgbe DVD Player na-enye ezi nkwado na-MPEG-2 DVD Ọdịdị faịlụ, na nnọọ ole na ole n'ime ha na-dakọtara na MPEG-4 videos. Ya mere ọ bụrụ na ị ebudatara fim ma ọ bụ dere mkpachị na MP4 (MPEG-4) video format, m atụ aro ka ị tọghata MP4 usoro ọzọ format dị ka MPEG ma ọ bụ ọkụ na faịlụ jidesie a DVD kpọmkwem maka playbacks on a DVD ọkpụkpọ.
Ke ibuotikọ emi, ndị Wondershare DVD Creator (DVD Creator for Mac)-ukwuu tụrụ aro iji nyere gị aka tọghata gị video faịlụ n'ime ụdị nile nke ndị ọzọ mgbe DVD-dakọtara video formats. Mgbe ahụ, ị na-ekiri ha cozily on n'ụlọ gị gị na DVD ọkpụkpọ ma ọ bụ TV. Biko rụtụ aka na nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu n'okpuru na otú i nwere ike ime ya n'ihi na a Windows arụ ọrụ PC. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ a Mac, biko ịmụta Mac version iji tọghata gị MP4 faịlụ n'ihi ya, ọ ga-dakọtara maka DVD ọkpụkpọ na a yiri nke ahụ.
Nkwadebe: Download ikpe mbipute nke a DVD Creator ka ọkụ gị MP4 faịlụ jidesie a DVD.
1 Tinye MP4 faịlụ
Pịa + mbubata gị MP4 videos n'ime isi interface wee pịa ↑ na ↓ megharia iji nke gị uploaded faịlụ.
2 Họrọ DVD menu (Nhọrọ)
E nwere ihe karịrị 40 free static na ike DVD menu ndebiri wuru na-n'ihi na gị DVD authoring ụtọ. Ka ịnweta edezi window, dị nnọọ pịa NchNhr na nhọrọ mmanya nri n'elu interface. Mgbe ahụ, bulie ọkacha mmasị gị otu hazie ederede ọdịnaya, etiti ma ọ bụ bọtịnụ si mmetụta.
Cheta na: The menu Ọdịdị ga-egosipụta na igodo ebi ndụ na n'aka ekpe n'akụkụ. I nwekwara ike ịtọ akụkụ ruru na 16: 9 ma ọ bụ 4: 3 ka kwa gị video mkpa. Na NchNhr 's window, ị nwere ike kpamkpam tinye ederede ọdịnaya na ịgbanwe etiti ma ọ bụ bọtịnụ si mmetụta.
3 Malite MP4 ka DVD ọkpụkpọ akakabarede
Pịa Preview iji jide n'aka na mmetụta nile na-aga dị ka otú ị ga-amasị ya ha ka ha bụrụ. Ozugbo afọ ojuju, dị nnọọ pịa Ọkụ iji tọghata MP4 faịlụ gị DVD ọkpụkpọ. Tupu ọkụ, biko ewere echiche nke TV Standard; Họrọ NTSC ma ọ bụrụ na ị na-bi na USA, Canada na Japan, ma ọ bụ PAL bụrụ na ị na bi na Europe ma ọ bụ ndị ọzọ na Asia mba.
Cheta na: E wezụga converting ihe MP4 faịlụ ka a DVD ọkpụkpọ, a ọkachamara DVD Creator (DVD Creator for Mac) ọbụna-enye gị ohere iji tọghata MP4 videos na ISO oyiyi faịlụ na DVD nchekwa otú ị ga-enwe ike ịdị na-egwu vidiyo na niile mgbe DVD Player na-enweghị ọ bụla mma ọnwụ. Ị nwere ike họrọ gị mmepụta formats dabeere na gị mkpa n'oge DVD ọkụ nzọụkwụ.
Ugbu a, i nwere ike jikọọ ọkpụkpọ DVD gị elu-definition TV maka a elu playback mma. Ọ bụrụ na ị na-amasị na-ekiri ihe MKV, WMV, MOV ma ọ bụ MTS videos faịlụ, Wondershare DVD Onye Okike nwekwara ike ime na gị n'ime ole na ole clicks nke òké.
Biko na-ekiri ndị video mmasị maka a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi:
Tọghata mpg ka MP4: na-enweta oké mpg ka MP4 maka Mac / Win (Windows 10 gụnyere) inyere gị aka tọghata otu mpg faịlụ ka ihe MP4.
Play MP4 on Xbox 360: Ọ bụrụ na gị MP4 faịlụ okpu playback on Xbox 360, ị ga-esi mara ihe mere na ihe dị mfe ngwọta ebe a.
Tinye ndepụta okwu ka MP4: Isiokwu a ga-egosi gị otú tinye sobtaitel faịlụ gị MP4 vidiyo na Mac / Win (Windows 10 gụnyere).
Wondershare DVD Onye kere Comparison N'etiti Video Converter Ultimate na DVD Creater
DVDFab Alternative maka Mac (Yosemite gụnyere): tọghata DVD ọ bụla Video ma ọ bụ naa
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata MP4 ka a DVD Player